Daawo:- Maxay tahay xogta uu bixiyay Taliyihii degmada Shibis ee ka goostay Dowladda? - Ceeldheer News: Somalia News Update
Daawo:- Maxay tahay xogta uu bixiyay Taliyihii degmada Shibis ee ka goostay Dowladda?
Taliyihii degmada Shibis ee gobolka Banaadir oo ka goostay dowladda fedraalka Soomaaliya ayaa u galay ciidamada Millatariga ee ka soo hor jeeda muddo kororsiga,islamarkaana ku sugan Isgoyska Mirinaayada.
Farxan Axmed Xasan oo Warbaahinta kula hadlay Jiidda hore ee ciidamada Millatariga waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho uu dhib ka taaganyahay,islamarkaana uu garaawsaday in uusan qeyb ka noqon kuna biiray ciidamada ka soo hor jeeda muddo kororsiga.
Isaga oo si kooban ula hadlay Suxufiyiinta ayuu Carabka ku adkeyay in uu arkay Hooyooyin iyo Caruun Qaxaya,islamarkaana sababta dhan ay tahay Kursiga la isku dhejiyay iyo muddo kororsiga,waxana uu farrin u diray taliyasha kale ee Saldhigyada oo ugu baaqay in ay diidaan qaska.
Taliyaasha kale ee Saldhigyada ayuu ugu baaqay in ay soo garab istaagaan ciidankaan,islamarkaana kula dar-daarmay in dalka laga saaro dhibaatada uu ku jiro,lagana sifeeyo cadaowga.
Aqalka sare oo sharci darro ku tilmaamay dhaarinta guddiga la dagaalanka Musuq-masuqa
Maxaa looga hadlay kulanka dhex-maray Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Ururada Bulshada Rayidka?
Maxaa looga hadlay kulanka dhex-maray Ra'iisul Wasaare Rooble iyo Ururada Bulshada Rayidka?
Taliyihii Boolis ee Labaad oo ka goostay dowladda iskana dhiibay Mirinaayo
DEG DEG:- Banaanbax xooggan oo ka billowday degmada Kaaraan